काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठकमा उपस्थित नहुने जनाएपछि नेकपा बैठकबारे अन्योल बढेको छ।
उनले भने, ‘लाञ्छना पत्र फिर्ता हुनुपर्छ, म त्यो लाञ्छना पत्र मान्दै मान्दिन र त्यसमा छलफल पनि हुन सक्दैन। बहुमत, अल्पमत र कमिटी पनि मान्दिन। तपाइहरुले पार्टी फुटाइसक्नुभएको छ, अब के को पार्टी एकता ? यो के को प्रस्ताव हो ? तपाइँहरुले लगाएका आरोपहरुको मैले जवाफ दिइसकेको छु । अब त्यसमा फेरि छलफल किन गर्ने यो हुनै सक्दैन।’
ओलीले यस्तो भनेपछि प्रचण्डसहितका बहुमत नेताले भने बैठकमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रचण्डले भने ओलीलाई आफूहरुलाई उत्तेजित पार्न खोजेपनि उत्तेजित नहुने भन्दै भन्नुभएको थियो, ‘कमरेड उत्तेजित नहुनुस् प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भइसक्यो।’ तर प्रचण्डको भनाइ प्रतिवाद गर्दै ओलीले ‘कसरी छलफल हुनसक्छ ?’ भन्नुभएपछि अरु नेताले प्रचण्डका पक्षमा बोलेका थिए।
नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव कमिटीमा पेश भएर छलफलमा गइसकेको बताएका थिए। रामबहादुर थापा, इश्वर पोखरेलले पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठक आज बुधबार पुनः १ बजेका लागि बोलाइएको छ।